DHEGEYSO-Maamulka Hirshabeelle oo baaq u diray Puntland iyo Galmudug. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Maamulka Hirshabeelle oo baaq u diray Puntland iyo Galmudug.
Oktoobar 25, 2016 2:42 b 0
Jowhar, Oct 25 2016–Madaxweyne ku xigeenka Maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Guudlaawe ayaa Madaxda Maamulada Puntland iyo Galmudug ugu baaqay iney ka qeyb qaataan joojinta dagaalada ka soconayo Magalada Galkacyo.
Guudlaawe, ayaa ugu baaqay dhammaan cida ay qusayso inay kaalintooda ka qaataan sidii loo joojin lahaa colaada magaalada Galkacyo oo hadda todobaadkii saddexaad socota.
Dhanka kalena wuxuu si gaar ah ugu baaqay madaxweynayaasha Puntland iyo Galmudug loogu baahan yahay in ay deg deg ah ugu hogaansamaan baaqyada nabadeed ee ka soo baxaya Madaxda Dowlada, beesha Caalamka iyo Culimo’udiinka Soomaaliyeed.
DHEGEYSOO-Barnaamijkii Xulashada Daljir iyo Axmed Maxamed Nadiif.
DHEGEYSO-Sheekh Cabdiraxmaan Qoordheere*DFS waxay dalka ku celisey dagaalkii sokeeye*.